Man United Oo Beddelka Pogba Iyo Maguire, Chelsea Ku Dagaallamaysa Lemar, Arsenal Oo Heshay Daafac Iyo Wararkii Ugu Waaweynaa Suuqa Ciyaaraha Saaka Oo Jimce Ah - Gool24.Net
Man United Oo Beddelka Pogba Iyo Maguire, Chelsea Ku Dagaallamaysa Lemar, Arsenal Oo Heshay Daafac Iyo Wararkii Ugu Waaweynaa Suuqa Ciyaaraha Saaka Oo Jimce Ah
January 10, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa ku mashquulsan suuqa iibka ciyaartoyga ee bisha January, kaas oo ay naadiyada qaarkood dedaal adag ka samaynayaan si ay helaan ciyaartooyo ay ku xalliyaan dhibaatooyin ay qaybtii hore ee xili ciyaareedka kusoo jireen.
Wararkii ugu waaweynaa ee ay saaka qoreen wargeysyadu waxa ka mid ahaa:
Tababaraha West Ham, David Moyes ayaa doonaya inuu la midoobo laacibka khadka dhexe ee Marouane Felleini oo ah 32 jir u dhashay Belgium oo uu doonayo inuu kasoo qaato kooxda Shandong Luneng. (Sky Sports)
Chelsea ayaa Tottenham kula biirtay tartanka garabka reer France ee Thomas Lemar oo 24 jir ah oo ay doonayaan inay amaah illaa dhamaadka xili ciyaareedka ah kaga soo qaataan Atletico Madrid. (Telegraph)
Spurs waxa kale oo ay fiirinaysaa suurtogalnimada sida ay ku heli karto weeraryahanka Moussa Dembele oo ah 23 jir ka tirsan Lyon oo ay u doonayso inuu galo booska Harry Kane oo dhaawac ku maqnaanaya illaa bisha Arpil. (Goal)
Tottenham waxay heshiis 28 milyan oo Gini ah la gashay AC Milan oo ay kasoo qaadanayso weeraryahanka reer Poland ee Krzysztof Piatek oo 24 jir ah. (Sun)
Manchester United waxay aqbashay in ay heshiis la saxeexato khadka dhexe ee Tottenham iyo Denmark ee Christian Eriksen oo ah 27 jir doonaya inuu tago Old Traffrod. (Evening Standard)
Laakiin kooxda Old Trafford waxay aad uga shaqaynaysaa sidii ay bishan January u heli lahayd saxeexa daafaca Napoli ee Kalidou Koulibaly oo 28 ah.
Tababaraha Arsenal, Mikel Arteta waxa loo soo jeediyey inuu soo qaato difaaca Bournemouth ee Nathan Ake haddii aanay Chelsea la saxeexanin 24 jirkan reer Netherlands. (Star)
Spurs waxay xiisaynaysaa difaaca midig ee Barcelona iyo Portugal ee Nelson Semedo oo 26 jir ah. (Mirror)
Real Madrid waxay rabtaa inay iska iibiso Gareth Bale oo da’diisu tahay 30 jir inkasta oo uu wakiilkiisu tibaaxay in aan la filaynin in xagaagan uu ka tago. (Telegraph)
Barcelona ayaa kula dagaallamaysa Arsenal difaaca kooxda RB Leipzing ee Dayot Upamecano oo u ciyaara xulka qaranka France ee 21 jirka ka hooseeya.
Manchester United dib ayay ugu yeedhatay difaaca reer Cameroon ee Borthwich-Jackson oo 22 jir ah amaahna ugu maqnaa kooxda Tranmere Rovers, haddana dhaawac kasoo kabtay. (Sun)